Somali News 06.24.21 | KWIT
Kuwa ka badbaaday xadgudubka wadaadada ee ka dhexjira Kaniisada Katooliga ee Iowa ayaa maanta hadlaya kadib markii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Iowa uu daabacay natiijooyinka baaritaanka. Shabakada Badbaadayaasha Kuwa Ku Xadgudbay Wadaadada, ama SNAP, ayaa ka jawaabtay baaritaanka Xeer ilaaliyaha guud ee xadgudubka wadaadada ee gobolka.
Warbixinta ayaa lagu ogaaday inay jiraan eedeymo loo soo jeediyay seddex xubnood oo hadda ka tirsan wadaadada. Dhamaantood waxay kudhaceen banaanka sharciga ciqaabta xadidaada. SNAP waxay rabtaa in magacyadaas la shaaciyo.
Heerka shaqo la'aanta ee Iowa ayaa hoos ugu dhacay ilaa 3.9% bishii May xitaa iyadoo inbadan oo reer Iow ah ay ka shaqeeyeen shaqooyinka. Iowa Workforce Development ayaa shalay soo warisay in sicirku waxyar ka yaraayay heerka 3.8% ee shaqo la'aanta bishii Abriil.
Iyada oo ay tahay 4-ta bisha toddobaad dhammaadkeeda oo soo socota, in badan oo reer Iowans ah waxay ku dhawaaqi doonaan madax-bannaanidooda cudurka aafada iyagoo qaadanaya fasaxyo markii ugu horreysay bilo badan. Afhayeenad uhadashay AAA Iowa, waxay leedahay wadanka oo dhan, in kabadan 47.7 milyan oo Mareykan ah ayaa laqiyaasayaa inay qorsheynayaan fasaxyo inta udhaxeysa 1da iyo 5ta Julaay.
Waaxda Caafimaadka Degmada Dakota waxay siineysaa dadweynaha xarumaha caafimaadka ee tallaalka COVID-19.
Tallaallada Moderna iyo Johnson & Johnson COVID-19 waxaa la siiyaa Arbacad kasta ballan iyaga oo ballan looga qabtaa Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota, 1601 Broadway St., South Sioux City.
Noocyada tallaalka ah waxaa sidoo kale laga heli karaa bukaan socod eegtada 7-da Luulyo oo ku taal South Sioux City's Hall Hall, 201 W. 16 St., oo soconaya 3 ilaa 7 fiidnimo, iyo sidoo kale kiliinikada 14-ka Luulyo ee Don's Sports Bar & Grill, 801 W. 13th St., oo la qaban doono 3 ilaa 7 pm